Iingqungquthela zamaHlabathi zamaHlabathi zamaHlabathi kunye neziganeko ePittsburgh
Eunited States Pennsylvania Pittsburgh
Iholide yamahhala e-Pittsburgh
Ihlobo lasePittsburgh lenzelwe imikhosi, iikonkethi, imisebenzi yokuzonwabisa kunye nezinye izinto ezimnandi. Yintoni enye engcono kukuba ezinye zazo zikhululekile! Sifakazela ezinye zezinto ezikhululekile zokuzikhethela ukuba zenzeke kwindawo yasePittsburgh, kubandakanywa iikontoni zamahhala, iziganeko zamahhala, imisebenzi yamahhala kunye nokuzonwabisa okukhululekile.
Imithamo emithathu yeMigodi yobuGcisa
Njengemikhosi emininzi, unokuchitha i-fortune ukuba awuqapheli-ngokutya, imidlalo kunye nempahla.
Kodwa uMdaniso weziThuthi zoThutho ezintathu unikezela ubugcisa bakhululekile, umculo okhululekileyo, kunye nokwamkelwa kwamahhala, okwenza kube yindlela enkulu yokuchitha iiyure ezimbalwa ngaphandle kokuphula iibhanki. Umthendeleko uqhuba ekuqaleni kweJuni nganye ihlobo.
I-Allegheny County Summer Concert Series
Ngenye ihlobo, i-Allegheny County inikeza iintlobo zamahhala kunye neentlobo zamahhala kwiipaki ezahlukeneyo nakwezinye iindawo kulo lonke i-county. E-Downtown, iikonsathi zamahhala zivela entendelezweni ye-Allegheny County Courthouse, ngelixa kumadlelo angakujabulela iintlanganiso zamahhala kwi-South Park i-Amphitheatre, i-Hartwood Acres, i-Boyce Park ne-North Park. Zonke iikonkethi kwiichungechunge zeekhonsathi zasehlobo zase-Allegheny County zikhululekile kwaye zivulelekile kuluntu, kwaye ziqala ngo-7: 30 ntambama ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela.
Bamba ingubo kwaye uphumele ngaphandle kwelanga elingenakulilibala le-cinema phantsi kweenkwenkwezi. I-Catsema yasePittsburgh eCitipark e-Park ibonisa iifilimu eziqhelanisiweyo zentlalo kwiipaki ezisixhenxe zasePittsburgh.
Iimvumi ziboniswa iintsuku ezisixhenxe ngeveki (ipaki eyahlukeneyo ubusuku bonke) kwaye ziqhutywa ukusuka ngeveki yesibili ngoJuni ukuya ekupheleni kuka-Agasti. Eyona nto ihamba phambili - ikhululekile!
I-SouthSide Imisebenzi yoLwaphulo lweHlabathi lwaseKapa
Intloko kwiMisebenzi yaseSouthSide ngoLwesihlanu noMgqibelo ubusuku bomculo obukhohlakeleyo njengenxalenye yoLuhlu lweZiko loLonwabo, olugcinwe kwiSouthside Works Town Square.
Amakhonsathi amahhala aqhutywa rhoqo ngoLwesihlanu noMgqibelo ukususela ngo-6: 00 ukuya ku-9: 00, ngoMeyi ngo-Agasti. Futhi ungaphuthelwa kwiiTranspati @ iiMisebenzi, ezigcinwe njalo ngoMgqibelo wesibini lwenyanga, ngoMeyi ngo-Agasti ukususela ngo-5: 00 ukuya ku-11 ntambama
Iinkwenkwezi kwi-Seriesview ye-Summerview ye-Jazz Series
I-Beautiful Riverview Park e-Observatory Hill yindlela yokulungiselela iiNkanyezi zamahhala kwi-Seriesview ye-Riverview yeJazz, ebonisa izixhobo eziphezulu ze-jazz e-Pittsburgh ngoMgqibelo ngo-Agasti. Yenza isihlalo sengubo kunye ne-straw kunye nawe kwimisebenzi esuka kuRoger Humphries, Kea Michaels, kunye nokunye. Emva kokuba ikhonsathi ye jazz iphelile, gxila kwi-movie yehhafu ye-Dollar Bank Cinema kwi-Park. Iinqwenkwezi kwi-Riverview Jazz Series zixhaswa nguRadWorks kunye noBNY Mellon.
Iimimoya zasePittsburgh neWestern Pennsylvania
Iifilimu ezenziwe ePittsburgh
11 I-Pittsburgh Day Valentines Day Events
I-Santa Kuphela Ehlabathini - I-Tour Photo
Iinqwelo eziLwandle ezisixhenxe ze-Mariner Suites kunye neendawo zokuhlala
Oktobha yeKhalenda yeThupha yeKapa yase-Oklahoma
I-Downtown Long Beach nightclub kunye neBhari
Oktobha i-Houston Events kunye neMikhosi
Iindawo eziqhelekileyo zoLuntu ePittsburgh
Ukuhamba kwi-Wild Orleans eNew Side
Iinqununu zasehlobo zaseHuntsville zaseKapa - imisebenzi yezingane
Imisebenzi ephezulu yangaphandle e-Oklahoma City
Iholide zeeholide zaseMilwaukee Awufuni Ukulahleka
Ukwamukelwa kwezilwanyana ePhoenix
Izinto ezenziwayo kwiMontreal Weekend Thanksgiving: Uhlobo lwe-2017
Isikhokelo sama-101: Ipropane
I-10 yezinto eziphambili ezenzayo eTunisia, eNtshona Afrika